Okhiye namathiphu okuthenga i-smartwatch ephelele | Izindaba zamagajethi
Okhiye namathiphu okuthenga i-smartwatch ephelele
AmaVillamandos | | SmartWatch
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule nakunyaka othile, i- smartwatches noma yimaphi amawashi ahlakaniphile afanayo. Ngemuva kokungabaza okuningi kwasekuqaleni, kubonakala sengathi bakwazile ukuzinza emakethe futhi abantu abaningi ngokwengeziwe bagqoke eyodwa esihlakaleni, basebenzisa imisebenzi nezinketho abasinikeza zona kakhulu.
Inani lamamodeli atholakalayo ukuze lithengwe likhule kakhulu futhi uma ezinyangeni ezimbalwa ezedlule besingakhetha kuphela kumamodeli ayishumi nambili, manje ubunzima bokuthola i-smartwatch bukhule kakhulu. Uma ufuna eyodwa yalawa madivayisi ozoyifaka esihlakaleni namhlanje sizokusiza nge uchungechunge lwezeluleko ezithakazelisayo ongazithenga ngokuphepha futhi uzithole zilungile.
Ngaphambi kokungena kumathiphu wangempela wokuthola i-smartwatch sakho esisha, kufanele sikutshele ukuthi kubalulekile ukuthenga ngaphandle kokuxhamazela nokuthi ungakhethi idivayisi yokuqala esiyithandayo ngenxa yokwakheka kwayo noma intengo yayo. Futhi ngukuthi akuwona wonke amadivayisi walolu hlobo angahambisana ne-smartphone entsha noma abe yilokho esikufunayo, kuya ngezidingo zethu.
Uma ucabanga ukuthenga iwashi elihlakaniphile, lalelisisa izeluleko esizokukhombisa zona ngezansi, futhi uma uzisebenzisa futhi uzilandela kahle, uzobe uqinisile uma uthenga idivayisi yakho entsha.
1 Thola i-smartwatch ehambisana ne-smartphone yakho
2 Gcina engqondweni ukuthi uzokusebenzisa kanjani
3 Ama-smartwatches azimele
4 Idizayini, ukubonisa nokubamba
5 Intengo neBhethri
6 Umbono ngokukhululeka
Thola i-smartwatch ehambisana ne-smartphone yakho
Kuze kube namuhla akubona bonke lama-smartwatches athengiswa emakethe ahambisana nawo wonke amadivayisi eselula. Isibonelo esicacile yi-Apple Watch, enye yamawashi athengiswa kakhulu kunazo zonke emhlabeni, nokuthi noma ngabe uyithanda kangakanani, uma une-smartphone enohlelo lokusebenza lwe-Android, ngeke ukwazi ukuba nayo, ngoba ngeke ikuvumele okungaphezulu kokuhlola isikhathi.
Isikhathi esifushane kungenzeka ukusebenzisa ama-smartwatches anohlelo lokusebenza lwe-Android nge-iOS noma okufana ne-iPhone. Azisiniki amathuba afanayo naka-Android, kepha ayasebenza futhi ngokwazi kwethu, iGoogle isebenza ngokuqinile ukwenza ngcono amathuba amadivayisi we-Adroid Wear kumadivayisi we-Apple.
Android WearIsebenza nge-Android 4.3 noma ngaphezulu ne-iOS 8.2 noma ama-Smartphones aphezulu
Bukela i-OSIsebenza nge-iOS 8.2 noma ngaphezulu
Tizen: iyahambisana nama-smartphones amaningi akwa-Samsung futhi inezinhlobo ezahlukahlukene ze-Android njenge-Asus ZenFone 2, i-HTC One M9 noma iHuawei P8
Lezi yizinhlelo ezisebenza kakhulu, kepha abanye abakhiqizi baklame isoftware yabo, efana neGarmin noma i-SPC. Kulezi zimo, amadivayisi amaningi weselula emakethe ayahambisana, yize kungenasidingo ukuqinisekisa ngaphambi kokuqala ukuthenga i-smartwatch.
Ngaphezu kwalokho, nokuqeda lesi sigaba, kubalulekile ukuthi unake uhlobo lokuxhuma idivaysi yakho ephathekayo enayo futhi ukuthi wonke ama-asmartwatches emakethe adinga i-bluetooh ukuvumelanisa ne-smartphone. Kubalulekile futhi ukunaka ukuthi ukugqokwa okuningi kuxhuma nge-Bluetooth 4.0, ngakho-ke uma i-terminal yakho ine-Bluetooth 2.1 ngeke ukwazi ukuyivumelanisa nenkinga lokhu okucabangayo.
Gcina engqondweni ukuthi uzokusebenzisa kanjani
Ngokuya ngosizo ozolunika i-smartwatch ocabanga ukuyithenga, kufanele uncike kokunye noma kokunye. Futhi akufani nokufuna ukuyigqoka futhi uhlole izaziso ngezikhathi ezithile, kunokuyifuna idlale ezemidlalo noma ibe ngumngane wakho ongenakuhlukaniswa ngosuku, lapho ungakwazi noma ungakhiphi i-smartphone yakho ukubonisana nayo it.
Uma sifuna iwashi elihlakaniphile elizolisebenzisa ngenkathi senza ezemidlalo singancika kumadivayisi amabili enzelwe lokhu, i IMoto 360 Sport noma i Samsung Gear S2 Ezemidlalo. Enye inketho enhle kungaba I-Apple Watch Sport, yize kungabonakali kutuswa kakhulu ngenxa yokwakheka kwayo futhi ikakhulukazi intengo yayo.
Kukhona futhi ama-smartwatches emakethe aqondiswe kakhulu ekusebenzeni kwezemidlalo, kokunye okungeke kusazise ngemilayezo ye-WhatsApp etholakele, kepha ezosinikeza inani elikhulu lemininingwane maqondana nomsebenzi wethu womzimba.
Uma lokhu esikufunayo kuyi-smartwatch yosuku nosuku lapho ungabheka khona isikhathi, ama-imeyili akho futhi ulawule ifoni yakho, izinketho zikhulu kakhulu.
Lokho abaningi bethu abangathanda ukuba nakho yi i-smartwatch ezimele ngokuphelele, engasebenza ngokugcwele ngaphandle kwe-smartphone. Yize abaningi becabanga ukuthi alikho, lingamanga ngokuphelele, futhi yize kukhona amadivayisi ambalwa walolu hlobo, kukhona amanye emakethe.
El I-Samsung Gear S noma i I-LG Watch Urbane 2nd Edition LTE Angamawashi amabili ahlakaniphile asebenza ngokuzimela ngokuphelele kwe-smartphone yethu. Ngazo ungashaya futhi wamukele izingcingo, uphendule izaziso noma ungene kwi-Intanethi ngaphandle kwesidingo sokuxhunywa kudivayisi yethu yeselula.
Inkinga ukuthi kumele sibe neSIM khadi yewashi lethu le-smartwatch ngoba ukushintsha ikhadi njalo phakathi kwe-smartphone yethu newashi lethu eliwukusaphaza kuwukuchitha isikhathi okukhulu.
Idizayini, ukubonisa nokubamba
Namuhla kudayiswa inqwaba yamawashi ahlakaniphile emakethe, evela kubakhiqizi abahlukene futhi ngalinye linomklamo ohlukile. Esikhathini esithile esidlule, iningi lamadivayisi lalinomklamo oyisikwele odonse ukunakwa, ikakhulukazi ngenxa yoburhabaxa bawo. Kodwa-ke ezinyangeni ezisanda kwedlula ama-smartwatches amaningi acwengisisiwe futhi ahlelwa kalula.
Njengamanje eziningi zalezi zobuchwepheshe zinomklamo oyindilinga, onamabhande amahle futhi acishe afane newashi lendabuko. IHuawei Watch, iGear S2 noma iMoto 360 yizibonelo ezicacile zamawashi ama-smartwatch ama-3 anomklamo oqaphile ozoheha noma ngubani.
Okuxhunyaniswe kancane nedizayini yisikrini, esivame ukungabi sikhulu kakhulu futhi ngokuya ngedivayisi kuzoba yisikwele, unxande noma isiyingi. Kuncike kulokho okufunayo noma okufunayo, kufanele uncike kudivayisi eyodwa noma kwenye.
Ekugcineni, lapho uthenga i-smartwatch kufanele sinake ukuphatha kwayo. Ngokombono wami uqobo, ngicabanga ukuthi alikho iwashi elihlakaniphile eliphethwe ukuphatha elithengiswa emakethe njengamanje. Ama-smartwatches amaningi, noma ngabe avela ku-Motorola, Samsung noma Pebble, anembile kakhulu, futhi ngokuqinisekile alula ukusebenza. Kukho konke lokhu akufanele ube nokwesaba ngoba ngeke kukuthathe isikhathi eside ukuphatha i-smartwatch sakho esisha njengochwepheshe weqiniso.
Ekugcineni lapho uthenga i-smartwatch Kufanele sicabangele intengo, ngoba kunamadivayisi emakethe aqala kusuka kuma-euro angama-20 noma angama-30 kuya kuma-euro angama-18.400 okufanele inguqulo kanokusho kakhulu ye-Apple Watch.
Amawashi amaningi ahlakaniphile kuyiqiniso ukuthi ajwayele ukuhamba phakathi kwama-euro ayikhulu kuya kwangama-100, yize amanye ephuma kuleli banga noma ngaphezulu noma ngezansi. Inani lemali okufanele silisebenzise ukuze siphumelele ekuthengeni kunzima ukukwazi, futhi kuzoncika kakhulu kusabelomali umuntu ngamunye anaso.
Ngaphezu kwentengo, kufanele futhi sicabangele ibhethri esizosinikezwa yi-smartwatch futhi ngombono wami ukushaja lawa madivayisi nsuku zonke kuyinkinga yangempela. Noma iyiphi i-smartwatch ene-Android Wear kufanele ikhokhiswe cishe nsuku zonke, kuyilapho labo abanophawu lwePebble bengasetshenziswa ngaphandle kokushaja isikhathi esingangesonto.
Angikaze ngibe ngummeli omkhulu noma umthandi wama-smartwatches, kepha Kumele ngivume ukuthi ngokuhamba kwesikhathi nangokuthuthuka kanye nezinguquko zokwakha lezi zinhlobo zamadivayisi ezenzekile, zigcine zibalulekile empilweni yami yansuku zonke.
Njengamanje nginamawatchwatch amabili engiwasebenzisayo kuya ngosuku nokuthi ngizokwenzenjani. Ngibakhethe bobabili ngokubheka ukwakheka kwabo futhi ikakhulukazi ibhethri labo. I-smartwatch sokuqala engangithandana nayo kwakuyiTshana, ngenxa yebhethri lalo futhi ngoba lalihliswe ngokweqile futhi kwakungenakwenzeka ukungalithengi. Ngiyisebenzisa nsuku zonke ukuhlola zonke izaziso ezikuyo futhi ngikwazi ukukhohlwa ngebhethri elisele nokuthi lokho kuhlala izinsuku ezingaphezu kwezingu-5 ngaphandle kwenkinga.
Ngezinsuku ezikhethekile noma lezo lapho nginomhlangano noma isidlo somndeni ngine- Ukubuka kwe-Huawei, okungenye yengcebo yami enkulu kakhulu. Ngomklamo omuhle, ibhethri elikulo msebenzi nezinye izinketho nemisebenzi ethakazelisa ngempela, le smartwatch ingenze ngathandana kusukela ngosuku lokuqala futhi iyaqhubeka nokuthanda njalo lapho ngiyigqoka.
Wonke umuntu kufanele acacise kahle ukuthi ufunani noma uzosebenzisa nini iwashi lakhe elihlakaniphile. Uma ungenzi ezemidlalo, akunangqondo ukuthenga i-smartwatch egxile kwezemidlalo. Uma ungayeki ekhaya ngaphandle kokulala, udinga eyodwa enebhethri eliningi. Futhi ekugcineni, uma ugqoka ngendlela ehlukile, akunangqondo ukugqoka iwashi leHuawei elinomklamo ongahle kakhulu.
Yini osusele kuyo ukuze uthenge i-smartwatch sakho?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » Okhiye namathiphu okuthenga i-smartwatch ephelele
Amathiphu ayi-10 okuba inkanyezi yangempela ye-Instagram
Ungawubuka kanjani umdlalo we-NBA All Star 2016